WONDERFUL UNIVERSE: သားဦးစနေ
အကိုရေ..သားဦးစနေ မီးလိုမွှေဆိုတာ စကားနောက် တရားပါသလို ဖြစ်တာပါမယုံကြည်နဲ့ယုံကြည်လွန်းရင်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ထင်တာပဲအကိုလဲ ဘဝမှာတော်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့လေအကိုရေးထားတာကို အစကနေအဆုံးထိရင်ဘတ်နဲ့လာဖတ်တာပါပြီးတော့အကို့ရဲ့ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ကိုလဲညီလေး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ချစ်ကိုကြီး ဘိုယနေ့ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှသည်နှစ်များစွာတိုင် မပူမပင် မကြောက်ကြ မတောင်းတသောပျော်ရွှင်သည့်ဘဝကို ကျမ်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့်ချစ်ခင်ကြင်နာသောသူများဝိုင်းရံလို့အေးချမ်းသာယာသောဘဝကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့စနေဆိုတာကို စိတ်ထဲမထားနဲ့နော်ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်အကိုရဲ့ ညီလေးဖိုးစိန်
I read your post with great interest and sympathy. I respect you for what you have done for your family and for your education. You haveavery nice writing style. I look forward to reading the remaining part of this post.
ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ စာရှည်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။တလေးတစား စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ်။ စနေ ဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပြီးလည်း ထိထိခိုက်ခိုက်ခံစားရပါတယ်။ကျွန်မ လည်း အငယ်ဆုံးစနေသမီးပေမယ့် ပြောချင်တဲ့သူတွေ ပြောတာ ခံခဲ့ရတာပါ။အစ်ကိုစာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အသေးစိတ်အကျယ်ချဲ့ ရေးရင် ပိုကောင်းမယ့် စာစုရှည်ပါ။နောက်ဆက်တွဲကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်လည်မိတယ်..ဆက်သိချင်ပါတယ်.. ကျမတို့ တိုင်းပြည်က လူငယ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀ဒဏ်ရာတွေကို.. တရားခံတွေကိုလည်း စိတ်နာနေမိပါတယ်။
yeah, read all.i think some part is missing .about ur beloved " Ma Ma" :P.Just kidding .. Happy Belated Birthday !
ဆရာအောင်သင်းပြောခဲ့တာလေး အမှတ်ရမိတယ်။ ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ သို့မဟုတ် အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဲ့ဒီလူက မခံချင်စိတ်တစ်ခုရှိရှိကြိုးစားရင်းနဲ့ အောင်မြင်လာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး။ ရုပ်ဆိုးတဲ့ သူဟာ သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ အများအားကျလာအောင် လေးစားလာအောင် လုပ်ယူရတဲ့အဖြစ်လေး ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော သားဦးစနေဆိုတဲ့ စကားလေးကြောင့် အစ်ကို ပညာရေးမှာပိုထူးချွန်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ လာချင်းကောင်းပါတယ်ဗျ။ Cheers!
ကံကြမ္မာရဲ့စုတ်ချက်တိုင်းကမလှပခဲ့ပေမယ့်..အကို့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ ပြုပြင်လိုက်တော့ လှပပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်ချီကားတစ်ချပ်တော့ရခဲ့ပါတယ်..အကိုဟာမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကျေခဲ့တယ်..မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်ခဲ့သလို တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်..မိသားစုအတွက် ကိုယ်ကျိုးကိုတောင်စွန့်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တဲ့ အကို့ စိတ်ဓာတ်ကို အမြဲးလေးစားပါတယ်..အကို့ကိုမွေးခဲ့တဲ့ အကို့ မေမေ .. ဖေဖေ တို့ကလည်း အကို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် ဝမ်းသာပြီး ကျေနပ်နေကြမှာပါ..
အကို့ကိုတော့ လေးစားသွားပြီ...ညီမလဲ အကြီးဆုံး စနေသမီးပါပဲ...အပြောတော့ ခံခဲ့ရပေမယ့် အကို့လောက်တော့ အပြောမခံခဲ့ရဘူး။ လူတွေက စနေဆိုရင် ခုခေတ်ထိ လန့်နေကြတုန်းပဲ... ညီမကတော့ စနေဆိုတာနဲ့ အလိုလိုကို ခင်နေမိတယ်။ အဲလို သူများတွေကြောက်တဲ့ စနေဖြစ်ရတာတောင် ကျိတ်ပြီး ဂုဏ်ယူနေသေး ဟဲဟဲး)
စနေသားဦးဆိုရင်စကားပုံကနှိပ်ကွပ်ပြီးသားမို့လူတွေကအစွဲအလန်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ ဘိုဘိုရေ။တီတင့်လည်းစနေသမီးပေမယ့်ဘိုဘို့လိုလိမ်မာတာကြောင့်ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကအပြစ်တင်တာမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမကြားဖူးပါဘူးကွယ်။ ဆိုးတာလိမ္မာတာနေ့နံနဲ့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး သက်ဆိုင်သူရဲ့ သန္ဓေပေါ်မှာသာမူတည်ပါတယ်လေ။ ဘိုဘို့အကြောင်းလေးတွေဖတ်ရတာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
ကောင်းလှချေလား ကိုဘို ရ.. ဘဝတွေ က ဒီလိုပါပဲ ဗျာ... လောကဓံကြုံ၊ မဖြုံတမ်းပေါ့ မတုန်စမ်း နဲ့ စိတ်ခိုင်စေ တဲ့ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာ ပဲ သတိရပါဗျာ.. အားပေးလျှက်..
ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်... ဒါပေမဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားတဲ့ ကြိုးစားမှုဇွဲကိုတော့ ချီးကျူးမိတယ်...
ရေးထားတာကြာပြီပဲ။ နောက်ဆက်တွဲက ဘယ်မှာလဲ။ ဦးဘို ကျောင်းဆက်တက်ဖြစ်လို့ နောင့်တို့ ဒီမှာ ခုလို ခင်ခွင့်ရတာသိပေမယ့်...ဆက်ပီးတော့ ဖတ်ချင်သေးတယ်။ ဦးဘို တော်လိုက်တာ။ နောင့်
ကံကြမ္မာရိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တာကို အရမ်းလေးစားမိတယ်။ ဘဝအမောကို ဟာသနှောပြီး ရေးသွားတာ အရမ်းကို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီပို့စ်ဖတ်ရင်း ဝမ်းနည်းလာလိုက် ပြုံးမိလိုက် မျက်ရည်ကျလိုက် လေးစားအားကျလိုက်နဲ့ ခံစားချက် မျိုးစုံ ခံစားသွားရတယ်။ အဆက်ပြန်ရှာဖတ်လိုက်ဦးမယ်.. :)~ သဉ္ဖာ ~
ထပ်ဖတ်တော့လည်း ညက်ရည် ၀ဲချင်သွားတယ် ..း(ဒါမယ့် ဘာပြောပြောခုတော့ အကျိုးတရားတွေ ခံစားနေရပြီ မှတ်လား .. ကိုဘိုကွ ဖိုက်တင်း ....မနေ့ကပြောတဲ့ ကိစ္စလည်း မမေ့နဲ့ဦးနော် .. အချိန်က ဒီတိုင်း မနေဘူး .. :D